သမဂ္ဂ အဘဦးအုန်းမြင့် (သို့မဟုတ်) ကျွန်တော်သိခဲ့တဲ့ လူကြီးလူကောင်း တယောက်အကြောင်း
(၉၀) စက်တင်ဘာ ထောင်သပိတ်ဖြစ်တော့ ကျွန်တော်သရက်ကို ရွေ့သွားတယ်။ အဘနဲ့ကွဲသွားတယ်။ နောက် ၁၉၉၃ မှာ ပြန်လွတ်လာတော့ အဘကို အခမ်းအနားတိုင်းမှာ တက်တက်ကြွကြွ ပြန်တွေ့ရပြန်ရော။ အင်းယားကန်ဘေး ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ် ခြံဝင်းကျယ်နဲ့ ခေတ်မီတိုက်ကြီးထဲ ဒီ ဇရာထောင်းနေတဲ့ အဘအို သူဌေးလို အငြိမ်း နေနိုင်ရက်ကနဲ့ နအဖ၊ န၀တကိုမှ တုတ်နဲ့ဆွတဲ့ သူ့သတ္တိ မလေးစားဘဲ မနေနိုင်ဘူး။ အဘခြံကလည်း သွားရင် လူမသိအောင် ဘယ်ကမှ ကျော်ခွပြီး ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် တိတ်တိတ်ဝင်စရာ လမ်းမရှိ။ ထောက်လှမ်းရေးကို အရင် စာရင်းပေးသွားဘို့ပဲ ကောင်းတယ်။ န၀တ၊ နအဖတခေတ်လုံး အဘဖုန်းဘိုးတွေ ကျမှာစိုးလို့ထင်ပါ့။ အဘအိမ်ကိုမှရွေး အချစ်ပိုပြီး ဖုံးဖြတ်ထားလို့ သူ့ခမျာ ဘယ်သူ့မှ ဖုန်းမပြောနိုင်ရှာ။ ဖုန်းနဲ့ အချိန်းအချက် လုပ်မရ။ သူကလည်း မိသားစုကို အကုန်မှာပြီး၊ အိပ်ယာလိပ် ပြင်ပြီးသား။ သူ့ခေါင်းထဲ တွေးတာတခုထဲ။ ဒီအရေးတော်ပုံမှာ ဘယ်နေရာက သူဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာ တခုထဲ။ ဒေါ်စုနဲ့ တကွ နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ကျနေသူတွေ နေ့စဉ်စားဘို့ ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်စီမံနေတာမျိုး။ ဘယ် ထောင်က ဘယ်သူ့ဆီကို ဧည့်တွေ့သွားမှာလဲ။ သူတို့ အဖွဲ့မှာ ကူငွေဘယ်လောက်ရလို့ ဘာကူညီလိုက်ရမလဲဆိုတာမျိုးတွေ။ သူ့ခြံက ပြန်ထွက်ပြီဆိုတာနဲ့ ခြံထဲထိ ဆင်းလိုက်လာပြီး ခြံအနှံ့ သံပုရာသီးတွေ ကိုယ်တိုင်လိုက်ခူး။ အလုံး ၅၀ - ၁၀၀ ပေးလိုက်တာချည်း။
“ထောင်ထဲမှာ သံပုရာသီးက အဖိုးတန်တယ်ဗျ။ များများသာယူသွား။”
ထောင်ဝင်စာ သွားမယ့်သူတွေအတွက် သူအမြဲစုထားတတ်တာ သံပုရာသီးတွေ။ ကျွန်တော် အဘကိုချစ်တဲ့အချက်တခုက သူ့ကိုယ်သူ “ကျွန်တော် - ကျွန်တော်” လို့သုံးတာတခု။ တခါမှတ်မှတ်ရရ။
“ကျွန်တော် - ကျွန်တော့်မိန်းမကို သိပ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ။ သူသေခါနီးတော့ သားသမီးတွေ အားလုံးကို အနားခေါ်ပြီးမှာသွားရှာတာ။ နင်တို့အဖေကို မငြိုငြင်ုနဲ့။ စိတ်မဆိုးနဲ့။ သူ့ဘ၀မှာ ဘာတခုမှ မကောင်းတာ မလုပ်ခဲ့ဘူး။ သူ့အတွက်လည်း ဘာတခုမှ လုပ်တာမရှိဘူး။ ဒါကြောင့် နင်တို့အဖေကို စိတ်မဆိုးကြနဲ့။ သူ လုပ်ချင်တာ လုပ်ပစေ။ သူ့ကို ခွင့်လွှတ်ကြ - လို့ မှာသွားရှာတာဗျ။”
ကျွန်တော် အဘမိန်းမကို မတွေ့မီလိုက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အဘမိန်းမလည်း ကြီးမြတ်ပြီး ရှားတဲ့ ပါရမီဖြည့်ဖက်ပါလားလို့ မှန်းကြည့်လို့ရတယ်။ သူ့ခင်ပွန်းကို သူသေခါနီးမှာတောင် ပါရမီဖြည့်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကြင်ဖေါ်။ ၁၉၉၈ မှာအဘနဲ့ အမှုတွဲ တကြိမ်ထပ်ဖြစ်တော့ အဘကို အင်းစိန်တွဲဖက်ထောင် အထူးတိုက်မှာ ပြန်ဆုံရပြန်ရော။
“ကိုဆိုင်း ဒီတခေါက်ပါလာမယ် မထင်ဘူး ဆေးခန်းဖွင့်စဆိုတော့။ ခင်ဗျားတို့ ဆေးခန်းတော့ ကသီလင်တတွေဖြစ်ပြီ။ ဘာမှမကြာလိုက်သေးဘူး”
သူကပူတယ်။ ကျွန်တော်ကပြုံးတယ်။ ဒီခေတ်ထဲမှာ ဒါတွေက မျှော်လင့်ထားပြီးသား ဟာတွေဘဲ အဘရာ။ ကျွန်တော်တို့တွေ အလုပ်တူလုပ်ပေမယ့် ကိုယ့်အပိုင်း ကိုယ်လုပ်သွားကြတာ။ မလိုအပ်ဘဲ ဘာမှ မပြောကြဘူး။ ဒီတခေါက်လည်း အဘအနွေးထည်ကို ကျွန်တော် လက်ဆောင်ရပြန်တာ။ ဖေဖော်ဝါရီဆိုတော့ ချမ်းကောင်းတုန်း။ ဒီတခေါက် စစ်ကြောရေးကာလမှာ အဘအသက် (၈၀) ပြည့်တယ်။ ကွတ်ကီးလို မုန့်လေးတွေ သူလိုက်ဝေတယ်။ အထူးတိုက်မှာ လူက သူ့ကို ထည့်ပေါင်းမှ (၆)ယောက်ပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့အတူ လုပ်ကြံခံရတဲ့ အာဇာနည် ဦးဘ၀င်းရဲ့သား ဦးအေးဝင်း၊ မောင်ဝံသ၊ ဦးမိုးသူ၊ ပိသုကာ ဦးကျော်မင်းတို့ကို ထောင်မချဘဲ တိုက်လှောင်ထားချိန်ပေါ့။ သူတို့တွေမိသားစုနဲ့ တွေ့ခွင့် မရတာ (၃) နှစ်နီးပါးတောင် ရှိရော့မယ်။ ဦးသိန်းတင် (ပထဝီမောင်တင်) ကိုတော့ ကျွန်တော်တိုက်မှာ မဆုံလိုက်ရဘူး။ သူ့ ရောဂါကျွမ်းပြီး သေလုသေခင် ဖြစ်နေချိန်မှ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်လို့ အိမ်ရောက်ပြီး တရက်၊နှစ်ရက်အကြာမှာ ဆုံးပါးရှာတယ်။
“ခင်ဗျားအခုနေတဲ့အခန်းက ဦးသိန်းတင် နေသွားတဲ့အခန်းဗျ”
မောင်ဝံသက လှမ်းပြောတယ်။ ကျွန်တော်က အယူမသီးဘူး။ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ကျွန်တော်ပူနေတာ အဘ။ (၈၉) ကတည်းကစတဲ့ ဆီးကြိတ်က နောက်ထပ်(၁၀)နှစ် ဆိုတော့ တော်တော်ကြီးနေပြီလေ။ သူဆီးတခါသွား (၅) မိနစ်လောက်ကြာမယ်။ မပြီးဘူး။ ပြီးရင်လည်းပုဆိုးကို သူ - မထားတယ်။ ဆီးက တစက်တစက်နဲ့ ဆက်ကျနေ။ ဒါကိုပူတာ။ နောက်တယောက်ပူရတာ ဦးအေးဝင်း။ သူ့နှလုံးက ကဘောက်ကချာ ခုန်နေလို့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ လ အတော်ကြာသွားတက်။ ပြန်လာ နေ့တိုင်းဆေးသောက် နေတုန်း။ ကျွန်တော်ရောက်ပြီး သိပ်မကြာခင် ပိသုကာ ဦးကျော်မင်း ရေချိုးထွက်လာတာကို လှမ်းကြည့်၊ သိတ်မသင်္ကာလို့ ဆရာဝန်ကိုခေါ်ပြခိုင်း။ ဆရာဝန်လာစစ်၊ နောက်တနေ့ ဆေးရုံကို လူနာတင်ကားနဲ့ ထွက်သွားတာ။ တိုက်ကို ပြန်မရောက်လာတော့ဘူး။ ရေဖျဉ်းက တော်တော်စွဲနေပြီလေ။ အဲဒီလို ဘ၀မျိုးတွေမှာ ကျွန်တော် အဘအတွက် ရင်ပူခဲ့တယ် …. အဘရေ။ ……. အဘလည်းဒီတောင်ကိုကျော်ပါ့မလား။
(၉၈) ဧပြီမှာ အမိန့်တွေကျပြီး အင်းစိန်ထောင်မကြီးကို ရွှေ့ရတယ်။ ထောင်ပြောင်း အချုပ်ကားကြီးပေါ်တက်တော့ ပခုံးပေါ် တပွင့်တပ်ပြီး တုတ်တရမ်းရမ်းနဲ့ မာန်တက်နေတဲ့ အရာရှိက အဘကို ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်ရမလားဆိုပြီး အဖိုးကြီး သေသွားချင်သလားလို့ ကြိမ်းတယ်။ ကျွန်တော် အဖေ့ကိုပြေးမြင်တယ်။ အဖေ့အရာမှာထား၊ အဘအတွက် အရမ်း စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။ သြော်လူ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေကို ကျွန်တော်တို့စွန့်ခဲ့ရတယ်။
နောက်ကျွန်တော် ရွှေဘိုကိုရွေ့၊ (၇) နှစ်ပြည့်လို့ ပြန်လွတ်တော့ အဘကို မသေဘဲပြန်တွေ့။ ၀မ်းသာလိုက်တာ။ အမှုတွဲ (၂၃) ယောက်မှာ (၂) ယောက်ဆုံးကျန်ခဲ့တယ်။ နောက်တယောက် မကြာခင်ထပ်ဆုံး။ ဒီလို သမဂ္ဂမျိုးဆက်ဟောင်းတွေ တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေ။ အဘက ကျွန်တော်မသေသေးဘူးဗျ လုပ်နေတုန်း။ ကိုယ်အလေးချိန်က ပေါင် (၈၀) မပြည့်တော့ဘူး။ စိတ်ကသာ မာထားတင်းထား။ ပွဲတိုင်း ရောက်အောင်ကြိုးစားတက်နေတုန်း။
“ကိုဆိုင်းရေ ဒီစာတွေ ထုတ်ဘို့လုပ်ပါအုံး”
သူ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ စာမူကြမ်း မိတ္တူတွေ တထပ်ကြီး ပေးပြန်ရော။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ဂျပန်တော်လှန်ရေးလုပ်ဘို့ စကြံစည်တဲ့ အချိန်က အကြောင်းတွေ။ ပဲခူးဘက်ကိုသွားပြီး လျှို့ဝှက်အစည်းအဝေး လုပ်တဲ့အကြောင်း၊ ပါခဲ့ကြတဲ့ လူတွေ၊ တာဝန်ယူခဲ့ရတာတွေ။ ကျွန်တော် ထိုင်းကို ထွက်ပြေးလာတော့ စာမူတွေ တပါတည်း ယူမလာနိုင်ဘူး။ လုံခြုံရာမှာပဲသိမ်းခဲ့ရတယ်။
အဘရေ - ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု သမိုင်းကို အနံ့ရသွားပြီး ထောက်လှမ်းရေးတွေက ရှိသမျှစာအုပ်တွေ မြေလှန်ရှာသိမ်းနေတဲ့အချိန်၊ ကိုအောင်ထွန်းကို နအုံကွဲအောင်ရိုက် တအုပ်မကျန် ထုတ်ခိုင်းနေချိန်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် အထူးတိုက်မှာကြိတ်ပြုံးနေခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ အနံ့မရခင် (၈) လ လောက်ကတည်းက ကြိုပြီး အောင်မြင်စွာ ခိုးထုတ်ခဲ့တာ အဘကို ကျွန်တော်က ဖွင့်ဟ။ အဘစိတ်မပူနဲ့။ သမိုင်းတွေက မပျောက်ရှပါဘူးပေါ့နော်။ အခုတော့အဘလည်းအသိ။ နိုင်ငံတကာ ရောက်နေတဲ့ အဘသားမြေးတွေ ဗကသ-သမဂ္ဂ မျိုးဆက်တွေက အထူးထုတ် ထူထူကြီး ခန့်ခန့်ကြီး ထုတ်လိုက်ကြတာ။ သူတို့ ထပ်သိမ်း အကုန်မီးထပ်ရှို့လည်း မပူဘူးအဘရေ။ သမိုင်းဆိုတာ မီးရှို့လို့ ပျောက်ရိုးလား။ သူတို့ကိုယ်တိုင်ရေး ထုတ်ရင်ကော သမိုင်းဖြစ်မှာလား။ ဗြိတိသျှစာကြည့်တိုက်ကြီးမှာတောင် သွားပြီး တအုပ်လှူထားပြီးပြီ။ ဒီကို လာသိမ်းနိုင်အုံးမှာလား။
အဘခြေထောက်တွေ ယောင်နေပြီ။ လုံးဝလဲနေပြီဆိုတဲ့သတင်း။ ပြီးခဲ့တဲ့လက ကျွန်တော် ရတယ်။ အထူးတိုက်မှာ အဘကို ဆိုပြခဲ့တဲ့ “သမဂ္ဂအမေ” - ကို အဘမသေခင် အခွေထုတ်ပြီး အဘဆီပို့ဖို့ မှန်းထားတာ။ “ကိုဆိုင်း ထုတ်ဖြစ်အောင်ထုတ်နော်” … လို့ မှာခဲ့တာမမေ့ဘူး။ ကျွန်တော် အဘဆီ အချိန်မီ မပို့နိုင်တော့ဘူး။
“အဘ-အခု ကိုအောင်ဆန်းတို့နဲ့ ပုသိမ်ဘက်ပြန်ဆင်း သမဂ္ဂစည်းရုံးရေးခရီးတွေ ဆင်းနေပြီလား။ အဘကိုကျွန်တော်တွေ့နေတယ်”
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, September 18, 2010 Links to this post
ဘဘဦးအုန်းမြင့် ၏ နာရေး ဓာတ်ပုံ မှတ်တမ်းများ
နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး၊ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး၊အမျိုသားလွတ်လပ်ရေးနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးတွေမှာ တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့တဲ့ တို့ဗမာအစည်းအရုံးဝင် သခင်အုန်းမြင့်(၉၃ နှစ်)ဟာ ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်၊ နံနက် ၄း၃ဝ နာရီ က ရန်ကုန်မြို့၊ အနောက်ရန်ကင်း၊ သုခဝတီလမ်း၊ အိမ်အမှတ် ၃ (ဘီ) ရှိ နေအိမ်မှာ လူကြီးရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
ဘဘဦးအုန်းမြင့် ၏နာရေးဓာတ်ပုံ များအားပြည်တွင်းမှ ပေးပို့ လာသော သူငယ်ချင်းများနှင့် တကွ ကိုမောင်ရစ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(လွတ်မြောက်နယ်မြေ) မှဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီး သခင်အုန်းမြင့်ကွယ်လွန်ခြင်းအတွက်ဝမ်းနည်းကြောင်းထုတ်ပြန်
Condolence Letter for Thakhin Ohn Myint
ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် ပုဂံဒေသရှိ ဟိုတယ်အခန်းခနှင့် အသုံးစရိတ်များအား အမေရိကန် ဒေါ်လာသာပေးချေရတော့မည်
ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် ပုဂံဒေသရှိ ဟိုတယ်အချို့သည် အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှစ၍ ဟိုတယ် အခန်းခနှင့် အသုံးစရိတ်များအား အမေရိကန် ဒေါ်လာဖြင့်သာ ပေးချေပေးရန် ခရီးသွားကုမ္ပဏီများသို့ အကြောင်းကြားလာကြောင်း ယင်းကုမ္ပဏီများကပြောသည်။
အကယ်၍ အက်ဖ်အီးစီဖြင့် ပေးချေမည်ဆိုပါက ဒေါ်လာဈေးနှင့် ကွာခြားချက်အား အလိုက်ပေးကာ ပေးချေရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားကြောင်း သိရသည်။ အက်ဖ်အီးစီ တစ်ယူနစ်တန်ဖိုးမှာ စက်တင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ကျပ် ၈၀၀ ခန့် ဈေးရှိချိန်တွင် အမေရိကန် တစ်ဒေါ်လာလျှင် ကျပ် ၉၄၀ ဈေးရှိရာမှ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား ကုမ္ပဏီများကြား အဆင်မပြေမှုများ ဖြစ်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အခန်းခ ပေးချေရာတွင် နိုင်ငံခြားသားများထဲတွင် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများကသာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့မဟုတ် ယူရိုငွေဖြင့် ပေးချေလေ့ ရှိသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်၍ အလုပ်လုပ်နေသော နိုင်ငံခြားသားများကမူ အက်ဖ်အီးစီဖြင့် ပေးချေမှုများကြောင်း သိရသည်။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားကုမ္ပဏီများကြား အခန်းခပေးချေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စာချုပ်ချုပ်ဆိုစဉ်က အမေရိကန် ဒေါ်လာဖြင့်သာ ဈေးနှုန်းများ သတ်မှတ်ထားသဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့်သာ ပေးချေပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့သူ ခရီးသွားကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ပြင်ပပေါက်ဈေးတွင် အက်ဖ်အီးစီနှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာတို့အား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ပြန်လည်လဲလှယ်ရာတွင် ဈေးနှုန်းကွာဟချက် သိပ်မရှိလှသော်လည်း သြဂုတ်လဆန်းမှစ၍ အက်ဖ်အီးစီးနှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာကြား တစ်ယူနစ်လျှင် ကျပ်တစ်ရာနီးပါး စတင်ကွာဟလာခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အက်ဖ်အီးစီနှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာတို့၏ ပြင်ပပေါက်ဈေးများ နေ့စဉ်ဈေး ကျလျက်ရှိပြီး ၊စက်တင်ဘာ ၈ ရက်တွင် အမေရိကန် တစ်ဒေါ်လာလျှင် ကျပ် ၉၀၀ ဝန်းကျင်ရှိ၍ အက်ဖ်အီးစီ တစ်ယူနစ်လျှင် ၇၈၀ ကျပ်သာ ဈေးရှိကြောင်း7Day News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
(CRPP) ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြု ကော်မတီ ၁၂နှစ်မြောက် အခမ်းအနားကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒုက္ကဌ ဦးတင်ဦး နေအိမ် တွင်ကျင်းပပြုလုပ်
အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံ တွင် ဆေးကုသ ခံယူနေသော ဘဘဦးဝင်းတင်အား တိုင်းရင်းသားခေါင်ဆောင်များ လာရောက်တွေ့ဆုံ
သီတဂူ ဆရာတော်ကြီး အင်းစိန်ထောင်အတွင်း တရားပွဲ.. (ရုပ်သံ)...
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Saturday, September 18, 2010 Links to this post
Labels: ဗီဒီယို သတင်း, ရုပ်သံမှတ်တမ်း
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း(မြန်မာနိုင်ငံ) မှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းသခင်းအုန်းမြင့်ကွယ်လွန်ခြင်းဝမ်းနည်းကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, September 17, 2010 Links to this post
ဘဘဦးအုန်းမြင့် နာရေးသတင်းအား ပေးပို့ ပေးသော ကိုကျော်သူ အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
နအဖ စစ်အာဏာရှင်များ မတရား ဖမ်းဆီး ထားသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းးသားမိသားစု များအားအစဉ်အမြဲကူညီပေးနေသော ဘဘဦးအုန်းမြင့် ကွယ်လွန်
သခင်အုန်းမြင့် ယနေ့နံနက် ၄ နာရီခွဲတွင် ကွယ်လွန်သွားသည်ဟု ရန်ကုန်မှ လာသော သတင်းများအရ သိရသည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် အသက် ၉၂ နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်သည်။
သခင်အုန်းမြင့်သည် မြန်မာ့စာနယ်ဇင်းလောက၊ နိုင်ငံရေးလောကတွင် ထင်ရှားသူတဦး ဖြစ်သည်။ကိုလိုနီခေတ် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် အတွက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် နီးစပ်သူ တဦးဖြစ်သည်။ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားမှုတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် တဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်က သူ့ကို အကြိမ်ကြိမ် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။
၁၉၉၈ ခုနှစ်က ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုသမိုင်း မှတ်တမ်းတင်သူ တဦးကို ကူညီမှုဖြင့် နောက်ဆုံးအကြိမ် အထိန်းခံခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန်က အသက် ၈၀ အရွယ် ရှိပြီ ဖြစ်သော သခင်အုန်းမြင့်သည် ထောင် ၇ နှစ် ချမှတ်ခံရသည်။
လက်ရှိ စစ်အစိုးရ လက်ထက် မြန်မာပြည် ထောင်များတွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂ ထောင်ဝန်းကျင် အစဉ်အမြဲ ရှိနေရာ ထိုသို့ အကျဉ်းကျနေသူများ၊ ၎င်းတို့၏ မိသားစုများကို အားပေး ကူညီသူများကြားတွင် သခင်အုန်းမြင့်က အထင်ရှားဆုံး ဖြစ်သည်။
NLD ၏ လူမှု အထောက်အကူပြု အဖွဲ့တွင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ တာဝန် ယူခဲ့ပြီး အကျဉ်းကျနေသော၊ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသော နိုင်ငံရေးသမားများကို နှစ်ပေါင်း များစွာ ကူညီခဲ့သည်။
ကြွင်းကျန်သော ရုပ်ကလာပ်ကို တနင်္ဂနွေနေ့တွင် သင်္ဂြိုဟ်မည်ဟု သိရသည်။
NLD လူမှု အထောက်အကူပြု အဖွဲ့မှ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့် ဦးအုန်းမြင့်
ဘဘဦးအုန်းမြင့် နာရေးသတင်းပေးပို့ ပေးသော ကိုမောင်ရစ်အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
ဘဘဦးအုန်းမြင့် အတွက် ဝမ်းနည်းမှတ်တမ်း
ဘဘဦးအုန်းမြင့် ကွယ်လွန် သောသတင်းအား ကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ တော်တော်စိတ်ထိခိုက်မိခဲ့ပါတယ်ရှင်၊
ကျမ သိပ်ဒုက္ခ ရောက်ခဲ့စဉ် က ဘဘဟာ ကျမနေတဲ့ ဆင်းဒဝစ်လမ်း ရှိနေအိမ် အား လွယ်အိတ်ကလေး ကိုလွယ်ပြီး ကျမအဆင်ပြေရဲ့လား၊ထောင်ဝင်စာကို သွားနိုင်ရဲ့လားဆိုပြီး စိတ်ပူပင်စွာဖြင့် အမြဲလိုလို လာရောက်မေးလေ့ရှိခဲ့ သူတစ်ဦးပါ။ အမြဲတမ်း ကျမ အား စိတ်ဓာတ်မကျဘို့နဲ့ ကြိုးစားဘို့ကို ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ကျမ အမျိုးသား ကိုလဲ သူခေါ်နေကြနံမည်လေးက မိုးမိုး ဆိုပြီ အမြဲတမ်း နုတ်မှ ခေါ်လေ့ရှိပြီ၊ ကျမ အမျိုးသား မိုးမြတ်သူ အား ဘဘ က အင်မတန် ချစ်ခင် ခဲ့သူပါ။
ကျမ ထောင်ဝင်စာ ကိုမသွားမှာလဲ သူတော်တော် စိတ်ပူတတ်ပါတယ်၊ ကျမ အမျိုးသား ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးဝါးများကို လတိုင်း ဘဘ အမြဲ ပေးလေ့ရှိခဲ့တယ်၊ ကျမ ရဲ့ ထောင်ဝင်စာ အခက်အခဲ ကိုလဲ ဘဘ ကအမြဲနိုင် တဲ့ဘက်က ကူညီတတ်တာပါ၊ဘဘ ရဲ့ သိပ်ချစ်စရာကောင်တဲ့ အကျင့်လေးကတော့ သူထက်ငယ်တဲ့ဘယ်သူကိုမဆို နံမည်ရှေ့မှာ ကို ...၊မ....၊ ဆိုပြီးပြောလေ့ ရှိပါတယ်၊အမြဲတမ်း စိတ်ဓာတ်တက်ကြွ စွာနေလေ့ရှိပါသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီ ဝင်များမှ မဟုတ်ဘဲ နအဖ ရဲ့ မတရားမှုမှန်သမျှ ကို တော်လှန်နေကြတဲ့ နိုင်ငံ ရေးအကျဉ်းသား၊ ကျောင်းသား ပြည်သူ များရဲ့ မိသားစု နာရေးတိုင်းကို ဘဘ တစ်ယောက် အမြဲတမ်း သွားရောက် အားပေးစကားပြော လျက် ရှိခဲ့ပါသည်။ကျမ ၏ အဖေ နာရေးတွင် လည်း ဘဘ တစ်ယောက် လာရောက်ခဲ့ ပါသည်.။ယခု ဘဘ၏ နာရေး အား ကျမတို့ မိသားစု မသွားရောက် နိုင်တော့ပါဘူး။
ဘဘကွယ်လွန် တဲ့သတင်းကိုကြားရင်ဖြင့် နအဖ က မတရားဖမ်းဆီးထောင်ချ ထားသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများမှာ တော်တော် စိတ်ထိ ခိုက်ကြပါမည်၊နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ဟောင်းများ သည်လည်း ထိုနည်းအတူ စိတ်ထိ ခိုက်ကြမည် ဆိုတာ အမှန်ပါဘဲရှင်၊ ကျမ တို့လို နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား မိသားစုဝင် များလဲ အထူးပင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်.။
ဘဘဦးအုန်းမြင့်၏ မိသားစု နှင့် အတူ မိုးမြတ်သူ (မိုးမိုး) နှင့် မြတ်လေးငုံ တို့မှ ထပ်တူ ထပ်မျှ အထူးပင် ဝမ်းနည်းကြေကွဲ ရပါသည်.။
ကျမတို့ ဘဝ မှာအစဉ်အမြဲ သတိတရ ရှိခဲ့တဲ့ သခင်အုန်းမြင့် ရဲ့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း
၁၉၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၈ရက်တွင် ပဲခူးတိုင်း-လက်ပန်းတန်းမြို့နယ်တွင် အဘ ဦးမိုးကောင်း ၊အမိ ဒေါ်အေးတင် တို့၏သားတဦးအဖြစ် မွေးဖွားခဲ့သည်။
၁၉၃၃ခုနှစ် နိုဝင်ဘာတွင် ၁၀တန်းကျောင်းသားဘ၀ဖြင့် ဒို့ဗမာအစည်းအရုံး ကြွေးကြော်သံ စာရွက်များ ဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့် နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲသို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
၁၉၃၄ မတ်လတွင် ဆယ်တန်းအောင်ပြီးနောက် အောက်တိုဘာလတွင် ရန်ကုန်သို့ရောက်ရှိပြီး-
ရေကျော်ရပ်ကွက် နှင်းပန်းလမ်းတွင် ဂျာနယ်ကျော် ဦးချစ်မောင်နှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့ပြီး-
၁၉၃၆ခုနှစ် မှစတင်၍ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် "မမြန်မမာသော နှေးပျော့များ "ဆောင်းပါးပါရှိခြင်းဖြင့် စာနယ်ဇင်းလောကတွင် စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဈေးနှုန်းသတင်းစာတွင် "ဆယ့်နှစ်ရာသီပြုံး၊မြင့်အုန်း "ဟူသော ကလောင်အမည်များဖြင့် အခန်းဆက် ဆောင်းပါး၊၀တ္ထုရှည်များ ရေးသားလာခဲ့သည်။
၁၉၃၇ခုနှစ်-ဧပြီတွင် ပုသိမ်မြို့တွင် ကျင်းပသော တတိယအကြိမ် -မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ကွန်ဖရင့်သို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
၁၉၃၈-ဇွန်တွင် တိုးတက်ရေးသတင်းစာတွင် သတင်းအယ်ဒီတာအဖြစ် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး -သခင်အမည် စတင်ခံယူခဲ့သည်။ထို့နောက် ဂျာနယ်ကျော် ဦးချစ်မောင်နှင့်အတူ ဂျာနယ်ကျော် ဂျာနယ်ထုတ်ဝေရာတွင် ထုတ်ဝေသူအဖြစ် နာမည်ခံခဲ့သည်။ပြီးလျှင် ဂျာနယ်ကျော်တွင် ဆောင်းပါးများ ရေးသားခဲ့သည်။
၁၉၃၉ ၊ဇန်န၀ါရီတွင် တိုးတက်ရေးသတင်းစာတွင် ဆီမီးခွက် ဟူသော ကလောင်အမည်ဖြင့် ရေးသားသော နိုင်ငံရေးဆောင်းပါးတပုဒ်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်အစိုးရက တိုးတက်ရေးသတင်းစာအား အာမခံ တောင်းခံခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဒို့ဗမာအစည်းအရုံး ဌာနချုပ်တွင် အလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။
၁၉၄၀-မတ်လတွင် အိန္ဒိယပြည်လုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသားကွန်ဂရက်ကြီး၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ -ရမ်းဂါး ကွန်ဖရင့်သို့
ဒို့ဗမာအစည်းအရုံး ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
၁၉၄၂-မှ ၁၉၄၅ခုနှစ်တွင် ဖက်ဆစ်၈ျပန် ဆန့်ကျင်တော်လှန်ရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
၁၉၅၈ခုနှစ်တွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီ နေ၀င်းစစ်အစိုးရ၏ နိုင်ငံရေးပုဒ်မ=၅(ည)ဖြင့် ထန်းသိမ်းခံရပြီး ကိုကိုးကျွန်း အပို့ခံခဲ့ရသည်။
၁၉၈၉ခုနှစ်တွင် န၀တ စောမောင် စစ်အစိုးရက နိုင်ငံရေးပုဒ်မဖြင့် ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။
၁၉၉၆နှင့်၁၉၉၈တွင် နအဖ သန်းရွှေ စစ်အစိုးရက နိုင်ငံရေးပုဒ်မဖြင့် နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။
အသက်၈၇တွင် ထောင်ကလွတ်လာပြီးနောက် အန်အယ်လ်ဒီ လူမှုအထောက်အကူအဖွဲ့တွင် ၀င်ရောက်ပြီး
ထောင်ကျနေသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၊မိသားစုဝင်များကို ကူညီထောက်ပံ့ခဲ့သည်မှာ ကွယ်လွန်ချိန်အထိဖြစ်သည်။အဘသည် သူ့မွေးနေ့ရောက်တိုင်းလည်း ကိုကျော်သူတို့ နာရေးကူညီမှုအသင်းသို့သွားရောက်ကာ လှုဒါန်းမှုများပြုလုပ်လေ့ရှိခဲ့သည်။
အဘသည် ၂၀၁၀ စက်တင်ဘာ ၁၇ နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်နေအိမ်၌ ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး-နောက်ဆုံးအချိန်အထိ အန်အယ်လ်ဒီ လူမှုအထောက်အကူအဖွဲ့တွင် ဒု-ဥက္ကဌ အဖြစ် တိုင်းပြည်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
အဘရေးသားခဲ့သော ထောင်အရသာ စာအုပ်သည် နာမည်ကျော်ခဲ့ပါသည်။
အဘ၏ဇနီးမှာ ဒေါ်မြမြ(ကွယ်လွန်)ဖြစ်ပြီး-အဘ နောက်ဆုံးနေထိုင်ခဲ့သောလိပ်စာမှာ အမှတ်(၃) ဘီ- သုခ၀တီလမ်း၊ကမ္ဘာအေး-ရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပြီး- သားသမီး ၄ဦးကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်များရဲ့ စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်
ဦးတင်ဦး ခေါင်းဆောင်တဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များဟာ ၂၀၁၀ သြဂုတ် ၂၈ ရက်နေ့ နံနက် ၇ နာရီ မိနစ် ၂၀ က ရန်ကုန်မြို့မှ ပုသိမ်မြို့သို့ မော်တော်ကားများနဲ့ ထွက်ခွာပြီး ဧရာဝတီတိုင်း စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်များကို စတင်ခဲ့ရာ ပုသိမ်မြို့သို့ နေ့လည် ၁ နာရီခန့်တွင် ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့ ရောက်ရှိပြီး မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်မှာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်သူများ စုစုပေါင်း ၁၂၀ ခန့်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ညနေ ၄ နာရီမှာ ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ဟာ သြဂုတ် ၂၉ ရက်နေ့ မနက် ၇ နာရီမှာ ပုသိမ်မြို့မှ ကျုံပျော်မြို့သို့ ထွက်ခွာခဲ့ရာ ကျုံပျော်သို့ မနက် ၁၀ နာရီမှာ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျုံပျော်မြို့တွင် ကျုံပျော်မြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ရဲ့နေအိမ်တွင် ကျုံပျော်၊ ရေကြည်၊ ကျောင်းကုန်း၊ အသုတ်မြို့နယ်များမှ မြို့နယ် စည်းရုံးရေး အဖွဲ့ဝင်များ၊ လူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်သူများ စသည်ဖြင့် ပရိသတ် ၁၅၀ ခန့်နဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ နေ့လည် တနာရီခန့်တွင် ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် နေ့လည် ၂ နာရီခန့်တွင် ပန်းတနော်မြို့သို့ ထွက်ခွာလာခဲ့ရာ ပန်းတနော်သို့ ညနေ ၄ နာရီ မိနစ် ၄၀ တွင် ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် ညနေ ညနေ ၅ နာရီအချိန်တွင် ပန်းတနော်မြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင် တရာကျော်နဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ရာ ည ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် ပန်းတနော်တွင် ညအိပ်ကာ မနက် ၆ နာရီတွင် ပန်းတနော်မှ မအူပင်မြို့သို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာလာရာ မအူပင်မြို့သို့ မနက် ၈ နာရီခွဲတွင် ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
မအူပင်မြို့သို့ ရောက်ရှိစဉ် မအူပင်မြို့နယ် စည်းရုံးရေး အဖွဲ့ဝင်များနဲ့ လက်ဘက်ရည်သောက်ရင်း စကားစမည် ပြောဆိုကြကာ နံနက် ၉ နာရီတွင် ကျိုက်လတ်မြို့သို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ ကျိုက်လတ်မြို့သို့ နံနက် ၉ နာရီ ၅၀ မိနစ်တွင် ရောက်ရှိပြီး ထိုမှတဆင့် နံနက် ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ဖျာပုံမြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဖျာပုံမှ ဘိုကလေးမြို့သို့ စက်လှေများနဲ့ ဆက်လက် ထွက်ခွာခဲ့ရာ ဘိုကလေးမြို့သို့ ညနေ ၄ နာရီခန့်တွင် ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဦးတင်ဦးခေါင်းဆောင်တဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်များဟာ သြဂုတ် ၃၁ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီအချိန်တွင် ဘိုကလေးမြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်ပိုနေအိမ်တွင် ဘိုကလေးမြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဝင် ၁၉၀ ကျော်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ဘိုကလေးမှ ဖျာပုံသို့ နေ့လည် ၁၂ နာရီတွင် ထွက်ခွာလာရာ ဖျာပုံမြို့သို့ နေ့လည် ၂ နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင် ပြန်လည် ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုမှ ဒေးဒရဲသို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာလာရာ ဒေးဒရဲမြို့သို့ ညနေ ၃ နာရီခွဲတွင် ရောက်ရှိပြီး ဒေးဒရဲမြို့နယ်အဖွဲ့ဝင်များနဲ့ နာရီဝက်ခန့် ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဦးတင်ဦးနဲ့အဖွဲ့ဟာ ဒေးဒရဲမှ ရန်ကုန်သို့ ပြန်လည် ထွက်ခွာလာရာ သြဂုတ် ၃၁ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီခန့်တွင် ရန်ကုန်သို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင် ဦးတင်ဦးနဲ့ ဦးဝင်းတင်တို့ဟာ ၂၀၁၀ စက်တင်ဘာ ၄ ရက်နေ့ မနက် ၁၁ နာရီခန့်မှာ တွံတေးမြို့သို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး တွံတေးမြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးခန်းမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများရဲ့ မိသားစုများကို သွားရောက် အားပေးခဲ့ပါတယ်။ ထို အခမ်းအနားကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က အကျဉ်းကျနိုင်ငံရေးသမားများနဲ့ အခြား နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မိသားစုများ ဖြစ်ကြတဲ့ ကိုရဲထွဋ်အောင်၊ ကိုအောင်စိုး၊ ဦးချစ်ခင်၊ ကိုဇော်မင်း၊ မစန္ဒာ၊ ဦးစံဘော်၊ ဦးသုဓမ္မ (ခ) ဦးသက်ဇော်တို့ မိသားစုများ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင် ဦးတင်ဦးနဲ့ ဦးဝင်းတင်တို့ဟာ စက်တင်ဘာ ၆ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက တိုက်ကြီးနဲ့ မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မိသားစုများနဲ့ တွေ့ဆုံရန် ရန်ကုန်မြို့မှ ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် တိုက်ကြီးသို့ နေ့လည် ၁၂ နာရီခွဲတွင် ရောက်ရှိပြီး တိုက်ကြီးမြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ရှိန်ရဲ့နေအိမ်မှာ ကိုစိုးမင်းသိန်း၊ ကိုအောင်ကျော်ဦးတို့ရဲ့ မိသားစုများကို အားပေးစကား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် မှော်ဘီမြို့သို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာလာရာ မှော်ဘီသို့ နေ့လည် ၂ နာရီတွင် ရောက်ရှိပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးတင့် (ခ) ဦးစိုးရဲ့ နေအိမ်မှာ ဦးပန္နိတ (ခ) ဦးမြင့်စိုး၊ ဒေါ်နော်အုန်းလှတို့ရဲ့ မိသားစုများကို အားပေးစကား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာမေ၀င်းမြင့်၊ လူငယ်လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့က ကိုအောင်စိုးတို့အဖွဲ့ဟာ တနင်္သာရီတိုင်းသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဝင်များနဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း၊ အမှတ်တရသစ်ပင် စိုက်ပျိုးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Friday, September 17, 2010 Links to this post
ဆရာကြီးအောင်သင်းရဲ့ ဟောပြောပွဲတစ်ခုက အသံဖိုင်ပါ..
စာရေးဆရာကြီး အောင်သင်းရဲ့ ငယ်ရုပ်သွင်ပါ..
ဆရာအောင်သင်း အသံဖိုင် Download လုပ်ချင်ရင်
တရုတ် စစ်တက္ကသိုလ်တွင် စစ်အာဏာရှင် ဦးသန်းရွှေ၏မြေး ဖိုးလပြည့်အား တရုတ်ပြည်၏ အဆွေတော် နိုင်ငံမှ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး ၏ သားသမီး အဖြစ် ချွင်းချက် ဖြင့်လက်ခံ
အဘိုး ဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ နှင့် အတူ တရုတ် ပြည်သို့ငါးရက် ကြာအလည်အပတ်သွားရောက်ခဲ့သည့် နေရွှေသွေးအောင် သည် သက်တမ်း ၈၅ နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်သည့် တရုတ် ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်၏ စစ်တက္ကသိုလ် တွင် ပညာသင်ယူ နိုင်ရန် အတွက် စာရင်းသွင်းထားပြီး ဖြစ်သည် ဟု သိရသည်။
စစ်တက္ကသိုလ် များ အနေဖြင့် အရည်အချင်း ပြည့်မှီ မှု ရှိမှ အချိန်ပြည့် သင်ကြားခွင့်ရရှိရန်လက်ခံသော်လည်းနေရွှေသွေးအောင် ကိုမူ တရုတ်ပြည်၏ အဆွေတော် နိုင်ငံမှ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး၏ သားသမီး အဖြစ် ချွင်းချက် ဖြင့် လက်ခံ နိုင်သည် ဟု ရုရှား နိုင်ငံ မော်စကို မြို့ တွင်ပညာ သင်ကြားနေသည့် စစ်တပ် အရာရှိတစ်ဦး က Freedom News Group သို့ ပြောသည်။
ထိုအရာရှိ က ဘယ်လို ပြောရမလဲ Honorable Doctrine ပေါ့ ဒီရုရှား မှာ လည်းရှိတယ်။ရုရှားစစ်တက္ကသိုလ်ကနေ အရှေ့ ဥရောပ နဲ့တခြား နိုင်ငံက ဒိုင်နက်စတီ သားသမီး တွေ ကို ခေါ်ပြီး တစ်နှစ် လောက် ပညာသင်ပေးသူတို့ ရဲ့ တိုက်ချင်းပစ် လက်နက် ထားတဲ့ နေရာ (ရှေ့့တန်း) တွေ နဲနဲ ပါးပါး လိုက်ပြပြီး ရင် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ ပေးလိုက်တာ တို့ဘာတို့ ရှိတယ်။ သူက ဘယ် လို ဘာသာရပ် ကို ယူမလဲ တော့ မသိဘူး။ဒါမျိုးကပညာတော်သင် ဆုပေး သလိုမျိုး ပဲ ဟု ပြောသည်။
နေရွှေသွေးအောင် သည် ပြီးခဲ့သည့် လက သူ၏ ရဟတ်ယာဉ် မိတ်ဆက် ပွဲ တွင် သူငယ်ချင်း များ အားနိုင်ငံ အုပ်ချုပ် ရေး ကို စိတ်မ၀င်းစား ဟု အတိအလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ယခု ဆေးတက္ကသိုလ် တက်နေ သည့် နေရွှေသွေးအောင် သည် အမေရိကန် စစ်ဘက်သုံး အပါချီ နှင့်ဘလက်ဟော့ ရဟတ်ယာဉ် များ ကို မောင်းနှင် လိုစိတ် ရှိ သည် ဟု ဆိုသည်။ ၎င်းသည် ထိုင်းတပ်မတော်သုံး
အမေရိကန် ရဟတ်ယာဉ် များ ရရှိ ရန် နည်းလမ်းများ စွာ ဖြင့် ကြံဆနေ သည် ဟု ၎င်း ၏ သူငယ်ချင်း တစ်ဦးက FNG သို့ ပြောသည်။
သတင်းရင်းမြစ်.. Freedom News Group
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, September 16, 2010 Links to this post
မြန်မာပြည်တွင်းက မရိုးနိုင်သောလိမ်နည်းနောက်တမျိုးကတော့ မင်္ဂလာဆောင်တွေကို ပစ်မှတ်ထား လိမ်လည် လုပ်စားလာ
‘မကြာမီ ဝါကျွတ်တော့မည်’၊ ဝါကျွတ်ချိန် မင်္ဂလာဆောင်ကြမည့် သူများလည်းပွဲ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် စတင်ပြင်ဆင် နေကြလေပြီ။ သို့သော်လည်း ယင်းတို့သတိမထားမိသော အချက်တစ်ချက်ကို ကြိုတင် သတိပေးလိုသဖြင့် ကိုယ်တိုင် ခံစားရသူများက သတိပေးပြောကြား လိုက်သည်။ ယင်းမှာ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲများကို ပစ်မှတ်ထား လိမ်ညာလှည့်ဖြား အမြတ်ထုတ်မှုဖြစ်ကြောင်း ယင်းတို့ကဆိုသည်။
လိမ်လည်သူများသည် ဟိုတယ်တွင် မင်္ဂလာဆောင်သည့် သူများကို ပစ်မှတ်ထားပြီး လက်ဖွဲ့ခုံနှင့် မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပရာနေရာဝေးသော ပွဲများကို အဓိကထားကြကာ နည်းမျိုးစုံနှင့် လိမ်ညာကြပြီး အများစု လိမ်လည်ပုံမှာ ဆွေမျိုးသားချင်း ယောင်ဆောင်ကာ လက်ဖွဲ့ငွေများညာယူခြင်း၊ လက်ဖွဲ့ငွေစာအိတ် ပုံမှားရိုက်လဲလှယ်ခြင်း၊ မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့များအား သယ်ယူရာတွင် ကားအစီးလိုက် ယူဆောင်သွားခြင်းမျိုးတို့ ဖြစ်တတ်ကြောင်း လိမ်လည်ခံရသူများက ရင်ဖွင့် ပြောကြားလိုက်သည်။
စာအိတ်ချင်း လဲလှယ်ခံရသူ တစ်ဦးကလည်း “မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ ဖလားထဲကနေ လူကြီးလူကောင်းပုံစံနဲ့ တစ်ဦးက စာအိတ်အထူကို သူလက်ဖွဲ့ထားတာ မှားနေလို့ဆိုပြီး ပြန်နှိုက်ယူပါတယ်။ သူ့ဆီက စာအိတ်ကို ပြန်ပေးတော့လက်ဖွဲ့ ခုံထိုင်တဲ့သူကပြောတာပေါ့။ ဦးလေးက ဘယ်သူ့နာမည်နဲ့ လက်ဖွဲ့တာလဲဆိုတော့ သူပြောတဲ့သူနဲ့ လွဲနေတဲ့အတွက် အော်တိုင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာပဲ သူ့စာအိတ်ပါထားခဲ့ပြီး ကားငှားလစ်ပြေးပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းသို့ဖြစ်ရာ မင်္ဂလာယူနေသည့် အချိန်တွင် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရမည့် ပုံစံမျိုးမှ ကင်းဝေးရန်အတွက် ပွဲမတိုင်ခင် အချိန်များ ကတည်းကစ၍ နှစ်ဖက်ဆွေမျိုးသိသော သူများထားရှိခြင်း၊ လူလိမ်သည် မည့်သည့်ပုံစံမျိုးနှင့် ဟာကွက်ရှာနေမည်လဲ မသိသည့် အတွက် ဝါကျွတ်ချိန် မင်္ဂလာဆောင်ကြမည့် သူများအတွက် ဂရုပြုနိုင်ကြစေရန် ရေးသားတင်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့ထုတ် ရန်ကုန်တိုင်း(မ်) ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ထိုသို့ဖြစ်ပွားမှုကို ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် မဟာဗန္ဓုလတံတားအနီးရှိ ထမင်းဆိုင်မှ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးက "တံတားပေါ်ကနေ သစ်လုံးတင်ကားကြီးတစ်စီးအရှိန်နဲ့ ပြေးဆင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်။ အဲဒီကားကြီးကို ကြည့်ရတာ အရှိန် မထိန်းနိုင်ဖြစ်ပြီး ဒယိမ်းဒယိုင် မောင်လာရင်းက တံတားအဆင်း မြေညီလမ်းပေါ်လည်းရောက်ရော ဖြည်းဖြည်းခြင်းယိုင်ပြီး လဲကျသွားတယ်။ ကားပေါ်က သစ်လုံးတစ်ဝက်ကျော်က လမ်းမပေါ်ကို ပြုတ်ကျကုန်တယ်။ ညပိုင်းဆိုတော့ တစ်ဖက်ယာဉ်ကြောက ကားမလာတာကံကောင်းသွားတယ်။ ပြီးတော့ ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ လူတွေရှိမနေလို့ အခြေအနေကောင်းသွားတယ်"ဟု ပြောပြခဲ့သည်။
အရှိန်လွန်တိမ်းမှောက်ခဲ့သည့် နေရာသည် သစ်လုံးတင်ယာဉ်ကြီးများ တိမ်းမှောက်လေ့ရှိသော နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ယခုဖြစ်ပွားသည့် သစ်လုံးတင်ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုသည် ယခုနှစ်အတွင်းဒုတိယ အကြိမ်မြောက်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင်လည်း သစ်လုံးတင်ယာဉ်ပေါ်မှ သစ်လုံးများပြုတ်ကျကာ အနီးအနားရှိ မော်တော်ယာဉ်များကို ပိမိခဲ့သဖြင့် လူသေဆုံးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း eleven ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်.။
'ဖြစ်စဉ်က မိုးရွာလို့ ရေလျှံတာကို သတင်းဓာတ်ပုံရိုက် သတင်းယူတဲ့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် တစ်ခုပါပဲ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒီလောက်အထိ အကျယ်ချဲ့ဖို့ လိုမယ်မထင်ပါဘူး။ အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ဆို မကွေးမှာဖြစ်တာ ဒုတိယအကြိမ်ပါ။ ပထမတစ်ကြိမ်တုန်းကလည်း မကွေးမှာ ခန့်ထားတဲ့ နယ်သတင်းထောက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခု ဖြစ်စဉ်နဲ့တော့ မတူပါဘူး။ ရဲစခန်းမှာ (၂)ရက် အချုပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ နယ်တွေမှာ သတင်းထောက်ရရှိဖို့ အင်မတန် ခက်ခဲပါတယ်။ အခု ကိစ္စမှာတော့ ဒီသတင်းထောက်ဟာ မကြာခင်ကမှ အစမ်းခန့်အနေနဲ့ ခန့်ထားရတဲ့သူပါ။ ဖြစ်စဉ်အရလည်း သတင်းထောက်အနေနဲ့ ရာသီဥတုသတင်း ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကို သတင်းရယူ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးတာကလွဲလို့ ဘာမှ အပြစ်ကျူးလွန်ထားတာ မရှိပါဘူး။ ကင်မရာသိမ်းတဲ့ အချိန်မှာလည်း သူတို့ကို ပေးလိုက်တာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ငယ်တဲ့အမှု ပပျောက်စေအောင် လုပ်ရမှာကို လက်ခံနိုင်စရာ မရှိတဲ့ ခံဝန်တွေ ထိုးခိုင်းပြီး မထိုးရင် ပြန်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ အနေအထားကတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ခံဝန်ကလည်း နောက်နောင် ဒီလိုမလုပ်ပါဘူး ဆိုတာမျိုးတွေက သတင်းထောက် တစ်ယောက်အတွက် ဘယ်လိုမှ ထိုးစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ သတင်းထောက်ကတော့ သတင်းယူရမယ့် တာဝန်ရှိပါတယ်။ သတင်းဓာတ်ပုံ ရိုက်ရမယ့် တာဝန်ရှိပါတယ်။ အခုလိုမျိုး ကိစ္စတွေများလာရင် နောက်နောင်နယ်တွေမှာ သတင်းယူရတာ၊ သတင်းထောက်တွေ ရပ်တည်ရတာ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါမျိုးတွေများလာရင် သတင်းထောက် လုပ်ရဲကြမှာတောင် မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ အပြောင်းအလဲကာလမှာ သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ အရေးပါပါတယ်။ ဘယ်လို ကိစ္စမျိုးကိုမဆို ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ ခွဲခြားကိုင်တွယ်ဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနဲ့ အခြား မြို့တွေမှာဆိုရင် ဒါဟာ သာမန် သတင်းကိစ္စ တစ်ခုပါပဲ။
ဒါပေမယ့် မကွေးမှာတော့ သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ရင် Sensitive ဖြစ်နေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တိုင်းဒေသကြီး မြို့တော်တစ်ခုအနေနဲ့ ဒါမျိုးက လုံးဝမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ အဲဒီအတွက် ကန့်ကွက်ပါတယ်။ မနက်ဖြန်မှာ အကြီးတန်း အယ်ဒီတာတစ်ယောက် မကွေးကို စေလွှတ်သွားမှာပါ။ နောက်ရက်မှာလည်း အခုလိုပဲ ဆက်ထိန်းသိမ်းထားမယ်ဆိုရင် ဥပဒေ နည်းလမ်းတွေအတိုင်း ဥပဒေကြောင်းအရပဲ ဆက်လက်တုံ့ပြန် ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ'ဟု Weekly Eleven တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ ကိုဝေဖြိုးက ပြောပါသည်။ မကွေးမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၏ မြို့နယ်မှူးမှာ ဒုရဲမှူး ကြည်ဝင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နအဖ စစ်အာဏာ ယစ်မှူး သူတို့ အတွက် ပြောကြားချက်
နအဖ စစ်အာဏာရှင် ဆိုတာက နိုင်ငံတော်အာဏာကို မတရား လက်နက်အာကိုးနဲ့သိမ်းယူထားတဲ့ အဖွဲ့
အမျိုးသားဒီမိုကရေ စီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)ဆိုတာက တရားဝင် လူထုမှ မေတ္တာတရားနဲ့ အာဏာ အပ်နှင့်ထားတဲ့
အဲဒီလို မတရားအာဏာသိမ်းထားတဲ့အဖွဲ့ က တရားဝင် အဖွဲ့ အစည်းကို မတရားတဲ့ အဖွဲ့ ဖြစ်တယ်လို့ 
ကြေညာတာဟာ ရီစရာ ပျက်လုံးတစ်ခုလိုပါပဲ ။
ဒါပေမယ့် - ဒါဟာ။
- ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို ဥပက္ခောပြုတာဖြစ်တယ်၊
- လူထုကို စော်ကားတာဖြစ်တယ်၊
- စစ်အာဏာရှင် စနစ်အတွက် စစ်အာဏာရှင်လူအုပ်စုက လူထုအားလုံးကို စိန်ခေါ် လိုက်ခြင်းဆိုတာ
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, September 15, 2010 Links to this post
နအဖ ကော်မရှင်. မတရား ထုတ်ပြန်ကြေညာ ချက်
မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားခြင်းကို ပယ်ဖျက်ှု ပါတီအားဖျက်သိမ်းခြင်း
၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဟောပြောမဲဆွယ်လျှောက်ထားခွင့်နှင့် လျှောက်လွှာတွင် သိရမည့်အချက်များ
လျှောက်ထားခွင့်ရှိသူများ။ သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကဖြစ်စေ၊ ယင်းရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်ကဖြစ်စေ လက်မှတ်ရေးသား လျှောက်ထားရမည်။ လျှောက်လွှာတွင် ဖော်ပြရမည့် အချက်များ။ ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်များသည်။ စုဝေးခြင်းနှင့်ဟောပြောခြင်းများကို တားမြစ်ချက်များခွင့်ပြုမိန့်ပါ သတ်မှတ်ချက်များ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြလျှောက်ထားရမည့်အပြင်....
(ဂ) စတင်မည့်အချိန်နှင့်ပြီးဆုံးမည့် အချိန်(ခန့်မှန်း)၊
(ဃ) တက်ရောက်မည့် အင်အား (ခန့်မှန်း)၊
(င) ဟောပြောမည့်ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်များအမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့် နေရပ်လိပ်စာ၊
(စ) လျှောက်ထားသူ၏ အမည်၊ မှတ်ပုံတင်နှင့်နေရပ်လိပ်စာ စသည့်အချက်များကိုလည်း လျှောက်လွှာတွင်
အပြည့်အစုံဖော်ပြရမည်ဟု စစ်အာဏာပိုင်သတင်းစာမှ ဖော်ပြပါရှိသည်။
ရဲမွန်တပ်ရင်း ၈ ရင်းက တပ်ရင်းမှူးတွေ အဖမ်းခံရပြီးတဲ့နောက် ကျန်တဲ့ အရာရှိ အရာခံနဲ့ တပ်သားတွေ အရွေ့အပြောင်းခံနေရ
ရဲမွန်တပ်ရင်း ၈ ရင်းက တပ်ရင်းမှူးတွေ အဖမ်းခံရပြီးတဲ့နောက် ကျန်တဲ့ အရာရှိ အရာခံနဲ့ တပ်သားတွေ အရွေ့အပြောင်း ခံနေရတယ်လို့ တပ်ကြပ်ကြီး တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
“အခု ကျနော်တို့ တပ်မှာဆိုရင် ရဲဘော်တွေကို ကြိုတင်အသိမပေးပဲ တပ်နေရာတွေ ပြောင်း ပစ်တယ်၊ သိမ်းထားတဲ့ လက်နက်တွေ လည်း အခုထက်ထိ ချမပေး သေးဘူး၊ တပ်ရင်း လုံခြုံရေးကို တပ်မ ၁၁ ကပဲ တာဝန်ယူထားတာ ၊ ဘဏ်စုငွေတွေလည်း ထုတ်မပေးသေးဘူး၊ ချထားတဲ့ လုံခြုံရေး တွေလည်း ပြန်မရုပ်သိမ်းသေးဘူး” လို့ ရဲမွန်တပ်ကြပ်ကြီး တစ်ဦးက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ရဲမွန်တပ်တွေကိစ္စ အပြင်ဘက်ကို မပေါက်ကြားရအောင်နဲ့ တပ်ရင်းအတွင်း ဘာမှမဖြစ်ပဲ ပုံမှန်အနေအထားလို့ အများထင်အောင် ရဲမွန်မြို့အတွင်းမှာ တပ်မ ၁၁ က တပ်မမှူး ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ ဘော်လုံးပွဲ၊ ခြင်းပွဲ၊ လက်ဝှေ့ပွဲလို ပွဲတွေကို အားကစားရုံကွင်းမှာ လုပ်ပေးနေတဲ့အကြောင်း သူက ပြောပါတယ်။
ဒီပွဲတွေမှာ ရဲမွန်တပ်ရင်းက ရဲဘော်တွေမပါပဲ တပ်မ ၁၁ နဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းက တပ်သားတွေသာ ပါဝင်တယ်လို့ တပ်ကြပ်ကြီးက ပြောပါတယ်။
ရဲမွန်တပ်ရင်းတွေမှာ အခုထက်ထိ တပ်ရင်းမှူးအသစ်တွေ ရောက်မလာသေးသလို ဘဏ်စုငွေပြန်ထုတ်ပေးဖို့ ပြဿနာအပါအဝင် တပ်တွင်းပြဿနာတွေ ပြေလည်မှု မရှိသေး ဘူးလို့ သူက ပြောပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်တွေ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲကို နေပြည်တော်က ဝင်ရွေးခံမယ့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ
မကြာသေးခင်ကမှ စစ်ဖက် ရာထူးကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ကြတဲ့ နအဖ ကောင်စီဝင် တွေဟာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ နေပြည်တော်ခရိုင် ထဲက မြို့နယ်သစ်တွေ ကနေ ကြံ့ခိုင်ဖွံဖြိုးရေး ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ အဖြစ် ဝင်ရောက် အရွေးခံကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နေပြည်တော် ခရိုင်အတွင်းက သီရိ ငါးမြို့နယ်လို့ လူသိများတဲ့ ဇေယျာသီရီ၊ ပုဗ္ဗသီရိ၊ ဒက္ခိဏသီရိ၊ ဥတ္တရသီရိနဲ့ ဇမ္ဗူသီရိ မြို့နယ်တွေမှာ မကြာသေးခင်ကမှ စစ်ဖက်ကနေ အရပ်ဖက် ပြောင်းခဲ့ကြတဲ့ နအဖ ကောင်စီဝင် သူရဦးရွှေမန်း၊ သီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦးနဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်တို့တွေက ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် လောင်းတွေ အဖြစ် ဝင်အရွေးခံ ကြမှာပါ။
ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တွေကို သောကြာနေ့က စိစစ်ပြီးပြီ ဖြစ်ပေမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က သက်ဆိုင်ရာ ကော်မရှင်ရုံးခွဲတွေ ကနေ တဆင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တွေကို အကြောင်းကြား တာသာ ရှိပြီး နိုင်ငံနဲ့အဝန်း ထုတ်ပြန် ကြေငြာခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘီဘီစီက စုံစမ်း ရရှိတဲ့ စာရင်းအရ ဆိုရင်တော့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်က ဇမ္ဗူသီရိ၊ ဦးရွှေမန်းက ဇေယျာသီရိ၊ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦးက ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် တွေကနေ ဝင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒက္ခိဏသီရိနဲ့ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် တွေမှာ ဝင်ပြိုင်မယ့် ကြံ့ခိုင် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တွေက ဦးမြင့်လှိုင်နဲ့ ဦးကျော်စွာခိုင်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ သုံးမြို့နယ် ဖြစ်တဲ့ ပျဉ်းမနား မြို့နယ်မှာ ဦးလှမြင့်ဦး၊ လယ်ဝေးမှာ ဦးဌေးဝင်း နဲ့ တပ်ကုန်း မှာတော့ ဦးမောင်ဦးလို့ အမည် စာရင်းမှာ တွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီသုံးမြို့နယ်မှာ တသီး ပုဂ္ဂလနဲ့ တခြား ပါတီ ကိုယ်စားလှယ် တချို့၊အမည်တွေကို တွေ့ရ ပေမယ့် သီရိငါးမြို့နယ် မှာတော့ ကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးကလွဲရင် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ပါတီသာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ ဝင်ပြိုင် နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တွေဟာ ဒေသခံ ပါတီဝင်တွေ ဖြစ်တယ်လို့ တစညပါတီ ပြောခွင့်ရသူ ဦးဟန်ရွှေက ဆိုပါတယ်။
ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဖက်က ဒီကနေ့ ထိပ်တန်း စစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ပြိုင်ရမယ် ဆိုပေမယ့် နိုင်ငံရေး ဆိုတာ ဘာမှ ကံသေကံမ၊ မပြောနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်တွေ အဲဒီနယ်မြေတွေမှာ အနိုင်ရနိုင် ပါသေးတယ် လို့တော့ ဦးဟန်ရွှေက ဆိုပါတယ်။
NLD ပါတီဟာ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ပေမဲ့ ပါတီ လုပ်ငန်းတွေ ကိုတော့ ဆက်လက် လုပ်ဆောင် သွားမယ်လို့ ပါတီ ခေါင်းဆောင် တွေကကြေငြာထားခဲ့ပါတယ်
မြန်မာ နိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က အန်အယ်လ်ဒီ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို နိုင်ငံရေး ပါတီ တစ်ခု အဖြစ် ဆက်လက် ရပ်တည် နိုင်ခွင့် မရှိတဲ့ တရားမဝင် ပါတီ အဖြစ် စက်တင်ဘာ (၁၄) ရက် နေ့က ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။
အန်အယ်လ်ဒီ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အပါအဝင် လာမယ့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း မပြုတဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကတည်းက ရပ်တည်လာခဲ့ကြတဲ့ ပါတီ ငါးခုနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မယ်လို့ မှတ်ပုံ တင်ပြီးမှ ကိုယ်စားလှယ် လောင်း အမည် စာရင်းကို အချိန်မီ မတင်သွင်း နိုင်တဲ့ ပါတီ သစ် ငါးခုကိုလည်း ဆက်လက် ရပ်တည်ခွင့် မရှိ တော့ဘူးလို့ကော်မရှင်က ကြေငြာ လိုက် ပါတယ်။
အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီဟာ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ပေမဲ့ ပါတီ လုပ်ငန်းတွေ ကိုတော့ ဆက်လက် လုပ်ဆောင် သွားမယ်လို့ ပါတီ ခေါင်းဆောင် တွေက ကြေငြာ ထားခဲ့ ပါတယ်။
ကော်မရှင် ဟာ တရားဥပဒေ အရ အာဏာ အပ်နှင်း ခံရခြင်း မရှိဘဲ ကြေငြာချက် တာလို့ ဦးဉာဏ်ဝင်းဆို
အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီ ကို ဖျက်သိမ်းတယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ကြေငြာတာဟာ နည်းလမ်း မကျတဲ့ အကြောင်းနဲ့ နဂို ကတည်း က စာရင်း တင်သွင်း ထားတာ မရှိတဲ့ အတွက် ဖျက်သိမ်း စရာလည်း မလိုဘူးလို့ပြောရေး ဆိုခွင့် ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက တုန့်ပြန် ပါတယ်။
အဖျက်ခံရတဲ့ တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေ စုပေါင်းပါဝင်တဲ့ စီအာပီပီ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မီတီကလည်း အန်အယ်ဒီက ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း ဝင်မှာ မဟုတ် တဲ့ အပြင် မှတ်ပုံတင် ထားတာလည်း မရှိတဲ့ အတွက် တချိန်ချိန်မှာ ဒီလို ကြေငြာနိုင်တယ် ဆိုတာ ခန့်မှန်းထားပြီး ဖြစ်တယ်လို့ အတွင်ရေးမှူး ဦးအေးသာအောင် က ပြော ပါတယ်။
နိုင်ငံရေး အရ ထိခိုက်မှု
အန်အယ်ဒီကို နိုင်ငံရေး ပါတီ အဖြစ်ကနေ ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ အတွက် နိုင်ငံရေး အဖွဲ့ အပေါ် အခြေခံ ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ စည်းရုံး လှုပ်ရှားခွင့်၊ လှုံ့ဆော်ခွင့်၊ လူထုနဲ့ ထိတွေ့ နိုင်မယ့် အခွင့် အလမ်းတွေကို ကန့်သတ်လိုက်တာ ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ အန်အယ်ဒီဟာ အတိုက်အခံ အဖွဲ့ အစည်း တစ်ရပ် အနေနဲ့ ဒါမှ မဟုတ် အစု အရုံး တစ်ခု အနေနဲ့ တော့ ပြည်တွင်းက ပြည်သူတွေကြားမှာသာ မက နိုင်ငံတကာ အလယ်မှာ ပါ ဆက်လက် တည်ရှိနေမှာ ဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု က နိုင်ငံတကာ ပဋိပက္ခ လေ့လာရေး ပညာရှင် ဦးမင်းဇော်ဦးက သုံးသပ်ပါတယ်။
အခု လုပ်ဆောင်မှုကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အင်အား အကြီးဆုံး အတိုက် အခံ ပါတီကြီးကို လုံးဝ ချုပ်ကိုင်လိုက်တာ လို့တော့ မမြင်ဘူးလို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။ မြန်မာ အစိုးရ အစိုးရိမ်ဆုံး အချိန်က အခု လောလောဆယ် အချိန်သာ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း၊ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူတို့ မျှော်မှန်းထားတဲ့ အတိုင်း စစ်တပ်က ကြောထောက် နောက်ခံ ပေးထားတဲ့ ပါတီ ကို ထိခိုက်မှာမျိုးကို မလိုလားလို့အခုလို လုပ်ဆောင်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဦးမင်းဇော်ဦးက မြင်ပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ဟာ တရားမဝင်ဘူးလို့ နိုင်ငံတကာက မြင်အောင် အန်အယ်လ်ဒီက လုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် ကန့်သတ် တာတွေ လုပ်နေတာ ဖြစ်ပေမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ လွန်ကာလ နိုင်ငံရေး အခင်း အကျင်း အသစ်မှာတော့ အန်အယ်ဒီ ပါတီ ဟာ ပါတီလို မဟုတ်ပေမဲ့ တခြား အသင်း အဖွဲ့အနေနဲ့ စည်းရုံး လှုံဆော်မှုတွေ ကို လုပ်ဆောင် နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်၊ အန်အယ်ဒီ ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ မဟုတ်ရင်တောင် တခြား နာမည် အောက်မှာ နိုင်ငံရေး လုပ်ဆောင်မှုတွေ လုပ်လာနိုင်မယ့် အခွင့် အလမ်းတွေ ရှိပါတယ်လို့ နိုင်ငံ တကာ ပဋိပက္ခ လေ့လာရေး ပညာရှင် ဦးမင်းဇော်ဦးက ယူဆပါတယ်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တို့မှ ဟောပြောမည်ဆိုပါခုနစ်ရက်ကြိုတင်ရမည်
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် နိုင်ငံရေးပါတီများသည် ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်တို့မှ ဟောပြောမည် ဆိုပါက ခုနစ်ရက် ကြိုတင်၍ ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
ရေဒီယိုအစီအစဉ်မှ ဟောပြောတင်ပြရာတွင် ဟောပြောတင်ပြခွင့် အချိန် ၁၅ မိနစ် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပြီး ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်မှ ဟောပြောတင်ပြရာတွင်လည်း ဟောပြောချိန် ၁၅ မိနစ် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ပါတီ၏ သီချင်းများကိုလည်း ထုတ်လွှင့်လိုပါက သတ်မှတ်ထားသည့် ၁၅ မိနစ်အချိန်အတွင်း ထုတ်လွှင့်ခွင့် ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများ အနေဖြင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရန် မူဝါဒ၊ သဘောထား၊ လုပ်ငန်းစဉ် စသည်တို့ကို ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်တို့မှ ထုတ်လွှင့်လိုပါက ပါတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ (သို့မဟုတ်) အတွင်းရေးမှူး က သတ်မှတ် ခွင့်ပြုပေးသည့် ရက်မတိုင်မီ အနည်းဆုံး ခုနစ်ရက်ကြိုတင်၍ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ ဟောပြောတင်ပြလိုသည့် စာမူနှင့်အတူ ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အဆိုပါစာမူသည် A4 အရွယ်အစား စက္ကူ ခုနစ်မျက်နှာထက် မပိုရကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ လျှောက်ထားကြသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများအား အဆင်ပြေစွာ ဟောပြောတင်ပြ နိုင်စေရန်အတွက် နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုချင်းအလိုက် ဟောပြောတင်ပြခွင့်ရရှိမည့် နေ့ရက်နှင့်အချိန်များကို ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က သက်ဆိုင်ရာဌာန အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ဟောပြောတင်ပြလိုသည့် စာမူကို လိုအပ်သလို စိစစ်ပြီး ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်း၍ ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးခြင်း (သို့မဟုတ်) ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်ကြောင်းနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားခြင်းကို ငြင်းပယ်ပါက အကျိုးအကြောင်း ဖော်ပြ၍ လျှောက်ထားသူထံ အကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ဟောပြောတင်ပြရာတွင် ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်း မပြုရသည့် တားမြစ်ချက် ကိုးချက်ကိုလည်း သတ်မှတ်ထားရာ ယင်းတားမြစ်ချက်များအနက် အချို့မှာ တပ်မတော်ပြိုကွဲရေးကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် (သို့မဟုတ်) တပ်မတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေရန် ဟောပြောပြုလုပ်ခြင်းနှင့် လူမျိုးရေး (သို့ မဟုတ်) ဘာသာရေး (သို့မဟုတ်) လူတစ်ဦးချင်း (သို့မဟုတ်) လူအများနှင့် ပတ်သက်၍ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် သိက္ခာနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ဟောပြောမှု (သို့မဟုတ်) စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု ပြုလုပ်ခွင့်ဲပုမည်ဟုeleven.ဂျာနယ်တွင်ပါရှိပါသည်.။
စစ်အာဏာပိုင် သတင်းဌာန မြန်မာအသံ မှယနေ့ညနေခင်းသတင်းတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီအပါအဝင် နိုင်ငံရေးပါတီ(၁၀)ခုအား တရားဝင်ဖျက်သိမ်းပါသည်ဟုကြေငြာ
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် တည်ဆဲ ပါတီဟောင်းများအနက် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD)၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (SNLD)၊ ပြည်ထောင်စု ပအိုးဝ်အမျိုးသားများ အဖွဲ့ချုပ်၊ ရှမ်းပြည် ကိုးကန့် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနှင့် “ဝ” အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ တို့ဖြစ်ကြပြီး ထိုပါတီတို့သည် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဆက်လက် တည်ထောင်ခွင့်နှင့် မှတ်ပုံတင်ခွင့်တို့ကို လျှောက်ထားခြင်းမရှိသဖြင့် ဖျက်သိမ်းခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ကြေညာသွားသည်။
၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မှတ်ပုံတင်ကြသည့် ပါတီသစ်များထဲမှ ပြည်ထောင်စု ကရင်အမျိုးသားများ အဖွဲ့ချုပ်၊ မြန်မာ့ လူ့ဘောင်သစ်ပါတီ၊ မြန်မာဒီမိုကရေစီ ကွန်ဂရက်၊ မြို (ခေါ်) ခမီ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးပါတီ (ပြည်) တို့ကို လွှတ်တော်သုံးရပ်စလုံးတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် ဖျက်သိမ်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဖျက်သိမ်းကြောင်း ကြေညာခံရသည့် ၁၀ ပါတီတို့သည် ဆက်လက်တည်ထောင်ခွင့် မလျှောက်ထားခြင်း၊ မှတ်ပုံမတင်ခြင်း၊ လွှတ်တော်သုံးရပ်စလုံးတွင် ဝင်ရောက် မယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် တရားဝင် ဆက်လက် ရပ်တည်ခွင့် မရှိတော့ဘဲ ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်ဟု စစ်အာဏာပိုင်သတင်းဌာန မြန်မာအသံ မှ ကြေငြာ သွားသည်။
ပွဲကြိုက်ခင် အမေရိကန် ရောက် မြန်မာများအတွက် နောက်ထပ်ပြုလုပ်အုံးမည့် စတိတ်ရှိုးပွဲ တစ်ပွဲ အားပေးလိုက်ကြပါအုန်းလား
ကိုယ့်ကျောင်းသားတွေ သွေးမြေကျခဲ့တဲ့ အရေးတော်ပုံတွေကို အရုဏ်ဦးမှာဖူးသည်ကြာ ဆိုသောဇတ်ကားမှာ မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံမှုတွေ နဲ့ ပြောဆိုပြီးသရုပ်ဆောင် နေသော မြန်မာသရုပ်ဆောင်ပျက် များကိုအားပေးအားမြှောက် ပြုလုပ်နေသော ၊တကိုယ်ကောင်းဆန်သော ၊စိတ်ဓာတ် အပြည့်အဝ ရှိနေကြသော ပြည်ပအားကိုးပုဆိန်ရိုး ဆိုသူများအတွက် နောက်ထပ်စတိတ်ရှိုးပွဲ တစ်ပွဲ အား ကြေငြာ ပေးလိုက်ပါသည်.။
့မြန်မာပြည်သူက ကျွေး မြန်မာပြည်သူက အားပေးပြီး မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ထမင်းကိုစား ၊မြန်မာလူငယ်တွေ အတွက်ထင်ယောင်ထင်မှားပြုလုပ်နေသောမြန်မာသရုပ်ဆောင်ပျက်များ၏သရုပ်ဆောင်မှုများကိုစစ်အာဏာရှင် အလိုကျ ပီပြင်စွာသရုပ် ဆောင်ထားသော အထူးသဖြင့် ထိုဇတ်ကားတွင် ကလျာမျိုးချစ် အဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သော ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းဆိုသော သရုပ်ဆောင်အားလုံးဝလုံးဝ ရွံရှာမိခဲ့ပါတယ်။ စစ်အာဏာပိုင်တွေကတော့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ငွေကြေးတွေကိုအလွှဲသုံးစားပြုလုပ်နေပြီး ယခုလို အသက်ငယ်ငယ် မြန်မာသရုပ်ဆောင်အမျိုးသမီးများအား စပွန်ဆာ ပေးပြီးဟောတစ်ယောက် ဟောတစ်ယောက်ဆိုပြီး သားသမီးချင်းမစာနာဘဲ ၊တွဲချင်တိုင်းတွဲ၊ကဲချင်တိုင်းကဲ၊အပြိုင်ကဲပြီး အင်တာနက် စာမျက်နှာများတွင်လည်း ယိုသူမရှက် မြင်သူရှက်၊ အများပြည်သူတွေမြင်တွေ့နေကြဖြစ်ပါသည်။
ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းဆိုသော သရုပ်ဆောင်မှာ မြန်မာ့သမိုင်း အားတကယ်ဘဲ မသိတာလား၊ဒါမှမဟုတ် စစ်အာဏာပိုင်များဆီက စပွန်ဆာ မရရှိမှကြောက်ပြီး မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာလားဆိုတာကိုတော့ သူကိုယ်တိုင်သာသိမှာဖြစ်ပါသည်.။ထို့အတွက်ကြောင့် ပြည်ပသို့ရောက်ရှိနေချိန်တွင် ပြည်ပမှာ ရှိသောမြန်မာ့ သမိုင်း နဲ့ပါတ်သက်သော ၈၈၈၈ လုံးအရေးတော်ပုံကြီး၏ ဗွီဒီယိုဖိုင်များ နှင့် သံဃာတော်အရေးအခင်းမှ ဗွီယိုဖိုင်များအားစစ်အာဏာရှင်တွေဟာဘယ်လောက်ရက်စက်စွာ ကျောင်းသားလူငယ်များ ၊မြန်မာပြည်သူများ၊ သံဃာတော်များကို သတ်ဖြတ်ထားသောသမိုင်းမှတ်တမ်းများကို လွတ်လပ်စွာကြည့်ရှုပြီး ခံစားနားလည် ပေးစေချင်ပါသည်.။ထိုဇတ်ကား ၏ဇတ်ဝင်ခန်းတွေမှာလို မေးနေသည့် မေးခွန်းများအား ကိုယ်တိုင်မျက်စေ့ဖြင့် လေ့လာ သွားသင့်ပါသည်.။
ပြည်ပ သို့ရောက်ရှိနေချိန်တွင် အမျိုးသားများအပေါ် မပေါ်တပေါ်တွေဝတ်ပြ၊ လှုပ်ပြ၊ ခါပြ၊ သီချင်းတွေဆိုပြ၊ ရောနှောမှုများပြုလုပ်နေပြီး စပွန်ဆာရှာ နေမည့်အစား ကိုယ့်ကမြန်မာသရုပ်ဆောင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်သော ကြောင့် မြန်မာ့ သမိုင်း အားသေချာ လေ့လာသင့်ပါသည်။ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းဆိုသော မြန်မာအမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်အားမနာလိုချင်အလျှင်မရှိသလို၊မစာနာလို့ပြောနေချင်းလည်းအလျှင်မရှိပါ.။
သူ၏ ထိုဇတ်ကားတွင် ပြောဆိုခဲ့သော စကားများမှာလည်း မြန်မာအရေးတော်ပုံများတွင် သွေးမြေကျပြီး သေဆုံးသွားခဲ့သော မြန်မာပြည်သူများ၊ ကျောင်းသားလူငယ်များ၊ သံဃာတော်များ နှင့် ယနေ့အချိန်ထိ စစ်အာဏာရှင်တွေ မတရားအကျဉ်းချထားသော မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရှိစစ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ အကျဉ်းထောင်ထဲမှကျောင်းသားလူငယ်များ၊မြန်မာပြည်သူများ၊သံဃာ တော်များအား သူမအနေနဲ့ အရင် ကိုယ်ချင်း စာနာသင့် ပါသည်.။လူတိုင်းတွင် စိတ်ခံစားမှု၊နားလည်တတ်မှုဆိုသိမှာ သင်ပေးစရာမလိုပါ၊ကိုယ်တိုင်စာနာ နားလည် မှသာ သိရပါသည်။
ယခုလို အမျိုးသမီးချင်း ဤကဲ့သို့ ရေးသားရသည်မှာ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းအနေနှင့်ကိုယ်ချင်းစာနာ သင့်ကြောင်း သူ့လို သူ့အရွယ် မြန်မာ မိန်းကလေးများ အရေးတော်ပုံတည်းတွင်ကျဆုံးသွားခဲ့ရခြင်း၊ အကျဉ်းထောင်ထဲ တွင် ယနေ့အချိန်ထိ မတရားဖမ်းဆီးခံထားရဆဲရှိပါသည်။ထိုမြန်မာမိန်းကလေးများသည် ပြည်သူများကမြှောက်ပေးလို့ ပြုလုပ်နေခြင်း မဟုတ်သလို အရေးတော်ပုံတိုင်းတွင်လည်း လူငယ် ဆိုသော စိတ်ဓာတ် တစ်ခုဖြင့်သာ ပါဝင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်.။ထိုသို့သော မြန်မာမိန်းကလေးများအား စော်ကားသော အသုံးအနှုန်းများဖြင့် ထိုအမျိုးသမီး ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း ကမပြောဆိုသင့်ပါ။
ထိုကားတွင် ပြောဆိုသုံးနှုန်းခဲ့ခြင်း အတွက် ကျမ အနေဖြင့် ယခုလို သူမ အားပြန်လည် ရေးသားခဲ့ခြင်း သာဖြစ်ပါသည်။ထိုအမျိုးသမီး ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း ဆိုသူသည် သူကိုယ်တိုင် ဘာတွေ ပြုလုပ်နေပါသနည်း၊မြန်မာအမျိုးသမီး လူငယ်တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး၊ လူငယ် စိတ်ဓာတ် မ ပြောပါနဲ၊့ပြည်သူတွေ အတွက်တောင် သမိုင်းအမှန် မပြောရဲဘဲ သမိုင်းအမှားတွေကို မဟုတ်မဟပ် လုပ်ဇတ်ခင်းပြီးပြောဆို နေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
အရုဏ်ဦးမှာဖူးသည့်ကြာ ဇတ်ကားတွင် ပါဝင်ခဲ့ သောသရုပ်ဆောင်များအားလုံး အားအပြတ်အသတ်ကို ရွံ့ရှာမိပါကြောင်း....။
အရုဏ်ဦးမှာဖူးသည့် ကြာ ဇတ်ကားတွင် စစ်အာဏာရှင်အလိုကျ ပီပြင်စွာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပြခဲ့သော ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း လို သရုပ်ဆောင်ပျက်များအား အမေရိကန် ရောက် မြန်မာများ မလိုလားကြောင်း ဆန္ဒပြခြင်းအား အပြည့်အဝကို ထောက်ခံ အပ်ပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, September 14, 2010 Links to this post
ဘီဘီစီ ဟဲလို သတင်းလွှာ
NLD ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး နိုင်ငံခြားမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူမည်
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရဦးတင်ဦးဟာ ရန်ကုန်မြို့ ပန်းလှိုင်ဆေးကုခန်းရဲ့ စီစဉ်ချက်အရ မကြာခင် ပြည်ပကို သွားရောက်ပြီး မျက်စိခွဲစိတ် ကုသတာကို ခံယူဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ဦးတင်ဦး မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ရရှိခဲ့တာ အပါအ၀င် မျက်စိခွဲစိတ် ကုသခံယူမယ့် အခြေအနေတွေကို ကိုရော်နီညိမ်းက ဆက်သွယ် မေးမြန်းတဲ့အခါမှာ ဦးတင်ဦးက အခုလို စပြီး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ကျနော်က အသက်အရွယ် နည်းနည်းလည်း ကြီးလာပြီပေါ့။ မတော်လို့ ခွဲစိတ်ကုတဲ့အခါ အချိန်ကြာရင်လည်း မေ့ဆေး ကြာကြာပေးရမယ့် ကိစ္စမှာ စဉ်းစားစရာ ရှိတယ်တဲ့။ တိုင်းပြည်အတွက် လူကြီးတယောက်လို ဖြစ်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့် အစစအရာရာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ကုသပေးချင်တယ်ဆိုတာ ရှိတယ်တဲ့။ ချောချောမောမော၊ အောင်အောင်မြင်မြင် ဖြစ်သွားအောင် လုပ်ချင်တာ ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒီ့ထက်ပိုပြီး သင့်တော် ကောင်းမွန်တဲ့ နေရာကို Refer လုပ်ချင်တယ်တဲ့။ အဲဒီလို သူတို့က ပြောတယ်ဗျ။
“ဒီနေ့တော့ ကျနော့်ဇနီး သွားပြီး ညှိတော့ ကျနော့်ကို မနက်ဖြန် ခေါ်ထားတယ်ဗျ။ အမှန်က သူတို့က ထိုင်း၊ စင်ကာပူ မပြောနဲ့ ဒီမှာလုပ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း တပတ်နှစ်ပတ်လောက် လုပ်လိုက်၊ ဒီမှာ ကုသလိုက်၊ ခွဲစိတ်လိုက်၊ ပြီးရင် သူက စင်ကာပူမှာ သူတို့ဆေးရုံ ရှိတယ်လေ၊ အဲဒီမှာလည်း သူက ပါရဂူပဲလေ။ အဲဒီမှာ လုပ်မယ်ဆိုရင် ပစ္စည်းပစ္စယ စုံတဲ့အတွက် သူ စိတ်ပိုအေးတယ်ပေါ့ဗျာ။ သူတို့ဘက်ကလည်း အင်မတန် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် စေတနာနဲ့ ပြောတာပါ။ အဲတော့ ကျနော် မနက်ဖြန် သူတို့နဲ့ သွားပြီး တိုင်ပင်ရမယ်။ အဲဒီဟာပါပဲ။”
ပြည်ပကိုထွက်ပြီး ဆေးကုဖို့အတွက် အန်ကယ့်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ်ကို အစိုးရဆီမှာ လျှောက်ထားဖို့ လိုအပ်မှာပေါ့။ အဲဒီကိစ္စရော အန်ကယ် ဘယ်လို စီစဉ်ပါလဲခင်ဗျ။
“တော်တော် စောစော လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လလောက်က စီမံထားတော့ ကျနော်နဲ့ ဆက်သွယ်တဲ့ ဆေးရုံက အစစအရာရာ အကုန်လုပ်ပေးတယ်။ သူတို့က Refer လုပ်တယ်ဆိုရင်၊ သူတို့က ဒီမှာထက် ဟိုမှာ သင့်တော်တာမို့၊ ခွဲစိတ်မယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း ဒီက ပါရဂူပဲလေ၊ အဆက်အသွယ် လုပ်ထားတဲ့ ဆေးရုံကိုး။ အဲဒီတော့ အဲဒီမှာလုပ်မယ်ဆိုရင် Passport နဲ့ ပတ်သက်လို့ အဆင်ပြေဖို့ရယ်၊ ဗီဇာကိစ္စ အဆင်ပြေဖို့ရယ်၊ သွားတာလာတာ အဆင်ပြေဖို့ရယ်၊ ဟိုမှာ ခွဲစိတ်ဖို့ အဆင်ပြေဖို့ရယ်၊ ဒါတွေအကုန်လုံး သူတို့ ထည့်လုပ်တယ်။”
အဲဒီတော့ ပန်းလှိုင်ဆေးရုံရဲ့ စီစဉ်ပေးချက်အရ အန်ကယ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ်က အန်ကယ့်လက်ဝယ်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လလောက် ကတည်းက ရရှိထားခဲ့ပြီးပြီဆိုတဲ့ သဘောလားခင်ဗျ။
“ရပြီးသားလက်မှတ်က အခု အစိုးရကပေးတဲ့ လက်မှတ်၊ အဲဒါကို မနက်ဖြန် သူတို့က ယူလာပါတဲ့။ အဲတော့ ယူလာပြီးရင် သူတို့က အကုန် ဆက်လုပ်မယ့် သဘောရှိတယ်။”
မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ်ကို အန်ကယ် ဘယ်လောက်တုန်းက လျှောက်ထားပြီး ဘယ်လောက်လောက်ကြာအောင် စောင့်ခဲ့ရပါလဲခင်ဗျ။
“လျှောက်တာ ကြာတော့ ကြာတယ်ဗျ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကလည်း ဒီမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်တာတို့ ဘာတို့ တလောက လာပြီး လုပ်ကိုင်ပေးသွားပြီးတော့ မကြာမတင်မှာပဲ လာပေးတဲ့ သဘောတော့ ရှိပါတယ်။”
အန်ကယ့်ကို ပြည်ပကိုထွက်ပြီး ဆေးကုသခွင့် ပေးတယ်ဆိုတဲ့ အခါကြတော့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေနဲ့ ပြန်ပြီး သုံးသပ်မယ်ဆိုရင် အန်ကယ်တို့ရဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က လက်ရှိအစိုးရ စီစဉ်နေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း သပိတ်မှောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချထားတဲ့ အချိန်မှာ အဲဒီပါတီရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ အန်ကယ့်ကို ပြည်ပကို ထွက်ပြီး ဆေးကုသခွင့် ပေးတယ်ဆိုတော့ ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ် ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာ စိတ်စေတနာကောင်းနဲ့ပဲ ထုတ်ပေးတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံရေးအရ တဘက်နဲ့တဘက် အချေအတင် ဖြစ်တာက သတ်သတ်၊ လူမှုရေးအရ အန်ကယ့်ကို ခွင့်ပြုတာက တပိုင်းလို့ အဲဒီလိုမျိုး ခွဲပြီး မြင်လို့ရပါသလား၊ အန်ကယ် ဘယ်လိုသုံးသပ်ပါသလဲခင်ဗျ။
“ခွဲမြင်လို့ မရပါဘူးဗျာ။ ဒါကတော့ သူတို့ ဆေးရုံက ခါတိုင်း လူနာတွေမှာ မြင်ရိုးမြင်စဉ်အတိုင်း မြင်တဲ့အပေါ်မှာ သူတို့ စီစဉ်တဲ့ သဘောပဲဗျ။ နိုင်ငံရေးသဘော အယူအဆတွေ အပေါ်မှာ ထင်မြင်လို့၊ ပြုလို့၊ ဒါတွေအပေါ်မှာတော့ ထူးခြားမှုရှိမယ် မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ပေးထားတဲ့ ဆေးစာတမ်းတွေအရ၊ သူတို့ ကျနော့်ကို လုပ်ကိုင်ထားတာတွေအရ ဒီအပေါ်မှာပဲ မူတည် ဆုံးဖြတ်ပြီး သူတို့ရဲ့ ဆေးရဲ့ သဘောသဘာဝ၊ ဆေးကုထုံးရဲ့ သဘောသဘာဝ အတိုင်း လုပ်တယ်လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ ဘာမှ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး အကြောင်းကြီးငယ်ကြောင့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။”
အန်ကယ် ဘယ်တော့လောက် မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်ခွာဖို့ စီစဉ်ထားပါသလဲခင်ဗျ။
အခုလိုမျိုး မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ချောချောမောမော ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ အပေါ်မှာ အန်ကယ့်အနေနဲ့ ဘာများ မှတ်ချက်ပေး ပြောချင်ပါသလဲခင်ဗျ။
“ဘာမှ မှတ်ချက်မပေးချင်ပါဘူး။ သာမန် အရပ်သားတယောက်ကို ပေးတဲ့သဘောပါပဲ။ ဘာမှ ထူးထူးထွေထွေ မရှိပါဘူး။ ပေးတဲ့ Passport ကလည်း အနီ၊ သာမန် ရိုးရိုးလေးပါ။ သာမန် အရပ်သားတယောက် ရတဲ့၊ မောင်ဖြူ၊ မောင်ဝါ ရတဲ့ လက်မှတ်မျိုးပါ၊ ဒါပါပဲ။”
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး ပြည်ပကို သွားရောက်ပြီး မျက်စိခွဲစိတ် ကုသခံယူမယ့် အခြေအနေတွေကို ကိုရော်နီညိမ်းက ဦးတင်ဦးကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲမပေးရေး သပိတ်မှောက် လှုပ်ရှားကြဖို့ အဖွဲ့ချုပ်လူငယ်များပြည်သူလူထုထံဖြန့်ဝေနေသောလက်ကမ်းစာစောင်
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, September 13, 2010 Links to this post
မြန်မာဒီမိုကရေစီ ကွန်ဂရက်သည် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်သုံးဦး အမည်စာရင်း မတင်သွင်းနိုင်ခဲ့သည့် အတွက် နိုင်ငံရေးပါတီ အဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘဲ ပျက်ပြယ်သွားပြီဖြစ်သည်။
ပါတီတည်ထောင်သူနှင့် ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဦးကောင်းမြင့်ထွဋ် တစ်ဦးတည်းသာ တစ်သီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာဒီမိုကရေစီ ကွန်ဂရက် နိုင်ငံရေးပါတီ အဖြစ်မှ ပျက်ပြယ်
"ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၁၀ ဦး လောက် ၀င်ပြိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ထားခဲ့ပေမယ့် ပိုက်ဆံက ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးစာ ငါးသိန်းပဲရတယ်"ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ဦးကောင်းမြင့်ထွဋ်သည် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားလူငယ်များ (ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ)နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အခြားဒီမိုကရေစီအင်အားစုများထံမှလည်း အကူအညီများရရှိရန် မျှော်လင့်လျက်ရှိသည်။
၎င်းသည် တောင်ဥက္ကလာပ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်တွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါမဲဆန္ဒ နယ်တွင် ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးအောင်သိန်းလင်း ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
မြန်မာ့လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တော့မည် မဟုတ်
မြန်မာ့လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီသည် လာမည့် ၂၀၁၀ ပါတီစုံ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တော့မည် မဟုတ် ကြောင်း ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇင်အောင်က စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့က ပြောသည်။
"ကျွန်တော်တို့ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ဖြစ်တဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းက ပါတီကွဲသွားတဲ့အတွက်ရယ်၊ နောက်ပြီး ပါတီ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အထွေထွေ အကျပ်အတည်းကြောင့်ပါ" ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးမျှ တင်သွင်းနိုင်ခြင်းမရှိသော မြန်မာ့လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ခွဲထွက်ခဲ့သော အဖွဲ့ဝင် ဟောင်းများက ပြည်သူ့ လူ့ဘောင်သစ် ပါတီအမည်ဖြင့် ပါတီ တစ်ခုထူထောင်ခဲ့သည်။
ပါတီအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးက ပါတီဝင်အချင်းချင်းကြားတွင် သွေးကွဲအောင် သပ်လျှိုဖြိုခွဲသလိုလုပ်ခဲ့ သည့်အတွက် ခုံအဖွဲ့က စစ်ဆေးပြီး တာဝန်မှ ဆိုင်းငံ့ထားကြောင်း၊ အဆိုပါ အဖွဲ့ဝင်က ပါတီသစ်ထူထောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးဇင်အောင်က ပြောသည်။
ပါတီသစ်တွင်ပါဝင်သော အဖွဲ့ဝင် အများစုမှာလည်း ၎င်းတို့ပါတီမှ တရားဝင်နုတ်မထွက်ရသေးကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
မြန်မာ့လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီသည် မေလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် မှတ်ပုံတင်ခွင့် ရရှိခဲ့ပြီး ယင်းပါတီမှ ခွဲထွက်ခဲ့သော ပြည်သူ့လူ့ဘောင်သစ် ပါတီသည် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက် ပွဲကော်မရှင်ကို ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ပါတီတည်ထောင်ခွင့် လျှောက်ထားခဲ့ပြီး ဩဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ပါတီ တည်ထောင်ခွင့် ရရှိခဲ့သည်။
ခေတ်သစ် ပြည်သူ့ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ် ၃၀ ၀င်ပြိုင်မည်
ရန်ကုန်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးများရှိ မဲဆန္ဒနယ်များတွင် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည့် ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီသည် လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်လောင်း ၃၀ အတွက် မှတ်ပုံတင်ကြေးများ ပေး သွင်းပြီးဖြစ်ကြောင်း ပါတီ၏ တွဲဖက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး(၂) ဒေါ်ရီရီစံ က ပြောသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ကိုယ်စား လှယ်လောင်း လေးဦး၊ ပြည်သူ့လွှတ် တော်တွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ခုနစ်ဦးနှင့် တိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၁၉ ဦး ယှဉ်ပြိုင်မည်ဟု ဒေါ်ရီရီစံက ပြောသည်။
"ဘဏ္ဍာရေးအခက်အခဲရယ်၊ အလှမ်း ဝေးလို့ အချိန်မရတာရယ် စတဲ့ အခက် အခဲတွေကြောင့် နောက်ထပ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၆၇ ဦး ကျန်ခဲ့တယ်။ ၁၀၀ နီးပါးလောက် ၀င်ပြိုင်နိုင်ဖို့ဟာ ကျန်ခဲ့ တဲ့လူက နှစ်ဆလောက်ဖြစ်နေတယ်။ "စည်းရုံးရေးကိုတော့ ၁၀ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်း ဆင်းနိုင်မယ်" ဟု ဒေါ်ရီရီစံ က ဆိုသည်။
စည်းရုံးရေးအသုံးစရိတ်နှင့်ပတ်သက် ပြီး ၎င်းက ငွေကြေးအမြောက်အမြား သုံးစွဲနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ လက်ကမ်းစာစောင် ဝေငှရန်နှင့် ခရီးစရိတ်အတွက်သာ အကုန်အကျခံနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
"ငွေကြေးပေးပြီး၊ မက်လုံးပေးပြီး စည်းရုံးတာမျိုး လုံးဝမရှိပါဘူး။ ဒါက လိမ်လည်လှည့်ဖြားတာပဲလေ။ လွှတ်တော်အမတ်လုပ်မယ့်သူ တွေက ဒါမျိုး လုပ်တာ မဖြစ်သင့်ဘူးလေ။ ကျွန်မတို့ ပါတီက ကိုယ်ပေးဆပ်နိုင်တဲ့အတိုင်း အတာအထိ ပြည်သူကို ပေးဆပ်သွား မှာပါ" ဟု ဒေါ်ရီရီစံကပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် က ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီကို မေလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြု ခဲ့သည်။
သမဂ္ဂ အဘဦးအုန်းမြင့် (သို့မဟုတ်) ကျွန်တော်သိခဲ့တဲ့...
ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် ပုဂံဒေသရှိ ဟိုတယ်အခန်းခနှင့် ...
နအဖ စစ်အာဏာရှင်များ မတရား ဖမ်းဆီး ထားသော နိုင်ငံရေ...
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်များရဲ့ ...
တရုတ် စစ်တက္ကသိုလ်တွင် စစ်အာဏာရှင် ဦးသန်းရွှေ၏မြေး ...
မဟာဗန္ဓုလတံတားအဆင်း ဒေါပုံသင်္ဘောကျင်းအနီး၌ စက်တင်ဘာလ...
ရဲမွန်တပ်ရင်း ၈ ရင်းက တပ်ရင်းမှူးတွေ အဖမ်းခံရပြီးတဲ...
စစ်အာဏာရှင်တွေ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲကို နေပြည်တော်က ဝင...
NLD ပါတီဟာ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ပေမဲ့ ...
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မ...
စစ်အာဏာပိုင် သတင်းဌာန မြန်မာအသံ မှယနေ့ညနေခင်းသတင်း...
ပွဲကြိုက်ခင် အမေရိကန် ရောက် မြန်မာများအတွက် နောက်...
NLD ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး နိုင်ငံခြားမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူ...
မြန်မာပြည်ရှိ အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော်များသာ...
တက္ကသိုလ်ကျောင်းတစ်ချို့မှာ ကျောင်းသားကျောင်းသူ မျာ...
ရပ်ကွက် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ ...